Tsy misy tsiny ny lalan'i Jehôvah
"Tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehovah, mamelombelona ny fanahy" - Sal. 19:7.
Ny lalàn'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra ny vahoakany fahiny dia hendry kokoa, tsara kokoa, ary mitsinjo ny maha-olona kokoa noho ny an'ny firenena mandroso indrindra eto an-tany. Mitondra ny mariky ny kilema sy ny fanirian'ny fo tsy voaova ny lalàn'ireo fanjakana samihafa. Ny lalàn'Andriamanitra kosa dia mitondra ny tombokasen'ny maha-Andriamanitra Azy. — PP, 465
Hoy ny mpanao salamo: "Tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehovah". Mahatalanjona aoka izany ny lalàn'i Jehôvah, noho ny fahatsorany sy ny fahafenoany ary ny fahatanterahany! Fohy izany ka mora amintsika ny mitadidy ireo foto-kevitra tsirairay raketiny. Tena mahataka-davitra koa anefa 'izany ka mahalaza amin'ny fahafenoany ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tsy ny asa miseho ihany no voafaoka ao anatiny, fa ny fisainana sy ny fikasana mbamin'ny faniriana sy ny fihetseham-po ao anaty koa. Tsy hain'ny lalàn'olombelona atao izany. Ny asa miseho ihany no voakasiny. Mety ho mpandika lalàna ny olona iray kanefa tsy asehony eo imason'olombelona izany.
Mety ho olon-dratsy izy — mpangalatra, mpamono olona, na mpijangajanga —kanefa raha tsy misy mahita izany dia tsy azon'ny lalàna melohina izy (...)
Tsotra ny lalàn'Andriamanitra sady mora takarina. Raha mankatô izany lalàna izany araka izay vitany ny zanak'olombelona, dia hahazo herin-tsaina sy fahaiza-manavaka mba hahatakarany misimisy kokoa ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fikasany izy ireo. Ary hitohy izany fitomboana izany, tsy mandritra izao fiainana izao ihany, fa mandritra ny mandrakizay; satria na toy inona na toy inona fandrosoany eo amin'ny fahalalana ny fahendren'Andriamanitra sy ny heriny, dia misy mandrakariva ny mandrakizay eo anoloany. — ST, 10 Janoary 1911
Koa satria "tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehôvah", dia avy amin'ilay ratsy ny fiezahana rehetra hanova izany. [...]
Ny fankatoavana ny lalàna ihany no mbola hitondra fitahiana lehibe ho an'ny olona sy ny firenena ankehitriny, toy izay nitahiana ny Hebreo fahizay. — ST, 10 Janoary 1911 .